डोल्पा । डोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा १० जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परेका दुर्इ जनाको जीवितै उद्दार गरिएको छ । सदरमुकाम दुनैबाट जुफालतर्फ जाँदै गरेको भे १ च १६१० नम्बरको जीप ठूलीभेरी नगरपालिका ९ कालागौडाबाट भेरी नदीमा खस्दा १० जनाको मृत्यु भएको हो । घटनामा उद्दार गरिएकाहरूको दुनै अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडाैं । मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । केही दिनअघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका तुलाधरको आइतबार दिउँसो निधन भएको हो । अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालबाट तुलाधरलाई नर्भिकमा रेफर गरिएको थियो । तुलाधर मस्तिष्कघात भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । ७८ वर्षीय तुलाधरको पौने एक बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडाैं । सरकरले १० कुटनीतिक नियोगका लागि चाँडै राजदुत सिफारिस गर्ने भएको छ । रिक्त रहेका चर र चाँडै रिक्त हुन लागेका ६ कुटनीतिक नियोगमा कात्तिकभित्रै राजदुतका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आगामी २ मसिरमा जापान भ्रमणमा जानुअघि नै राजदुत सिफरिसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । हाल भारत, न्युयोर्कस्थित संयुक्त […]
हेटौंडा – प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अपमान गरेको भन्दै विवादमा तानिएका प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापित बर्खास्त गरिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । समाचारमा मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री केशव स्थापितको भनाइ छापिएको छ । सबैसँग छलफलपछि बर्खास्त गरेको हुँ ‘मैले प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी नेतृत्व र प्रदेशका […]
आज राष्ट्रपति स्वदेश फर्किंदै
काठमाडौं । कतारको चार दिने भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज साँझ स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ । कतारी राजा शेख तमिम विन हमाद अलथानीको निम्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी गत सोमवार दोहा जानु भएको थियो । दोहास्थित अमिरि भवनमा दुई राष्ट्र प्रमुखबीच भएको भेटवार्तामा नेपाली कामदार, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा भैरहेको साझेदारीका विषयमा कुराकानी भएको थियो […]
भाइटीकाको शुभ साइत बिहान ११ः ५५ बजे
काठमाडाैं । यो वर्षको भाइटीकाकाे साइत कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा निस्केको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बुधबार भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको हो। कार्तिक शुक्ल द्वितीयमा दिदीबहिनीले दाजुभाइको दीर्घायु, सुख शान्तिको कामना गरी अष्टचिरञ्जीवी, यमराज, यमुना एवं बलि राजाको पूजा गरी त्यसको प्रसाद लगाइदिने परम्परा रहेको समितिका अध्यक्ष डा‍. रामचन्द्र गाैतमले बताए। […]
मंसिरभित्र मेलम्चीको पानी छाड्न निर्देशन
काठमाडाैं । अन्तिमसम्म मेलम्चीको सुरुङ परीक्षण गर्ने तयार भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । मेलम्चीदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म कुल २७।५८४ किलोमिटर सुरुङमध्ये ५ किलोमिटर सुरुङ मात्र ढलान हुन बाँकी छ । बाँकी ढलानको कामले गति लिएकाले मंसिरको अन्तिमसम्म सुरुङ परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए । ‘मन्त्रालयले त हामीलाई २० मंसिरभित्रै […]
काठमाडाैं । संयुक्त अबर इमिरेट्स युएइले गैरकानुनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई वैध रुपमा सोही देशमै रहनका लागि थप गरेको छ । यसअघि युएई सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि गत साउन १६ देखि कात्तिक १द्ध सम्म लागु हुने गरी तीनमनिे आमाफीको घोषणा गरेको थियो । उक्त आममाफीको समयावधि बुधबार सकिँदै थियो । आबुधाबीस्थित […]
बाँदरलाई ‘झ्यालखाना’ !
काठमाडाैं । जब बाँदर पल्कन्छ, बालीनाली सखापै पार्छ । पवर्तको महाशिलामा बाँदरले आतंक मच्चाएपछि गाउँसभाले नियन्त्रण गर्न संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्यो । ३० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गर्यो । र, साउनयता दुई सय तीन बाँदर नियन्त्रण गरिसक्यो । सबै वडामा बाँदरले खेती नाश गरेपछि नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिले शुरुमा हस्ताक्षर संकलन गरे । त्यसपछि गाउँसभामा […]
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले केही समयदेखि प्रहरी सङ्गठनको आलोचना भइरहेकाले सङ्गठन आन्तरिक सुद्धिकरणको प्रयास थालिएको जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बुधवार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले सङ्गठन सुधारको योजना थालिएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता सुवेदीले सङ्गठनभित्र रहेका एक व्यक्तिको गल्तीले पूरै सङ्गठनको बदनाम हुने वातावरण सृजना भएको […]